Jaamacadda Lafoole - Wikipedia
Jaamacada Lafoole waxee ku taalaa duleedka magaalada Muqdisho, waxee caasimada u jirtaa 22 km, waxeena u dhaxeesaa Muqdisho iyo Afgooye.
2 Taariikh Hore
3 Waaxyaha Jaamacada Lafoole
4 Barayaasha iyo Dadka Caanka ah
5 Nolosha Ardayda
6 Burburkii ka dib
7 Sidoo kale fiiri
Jaamacada Lafoole waa jaamacad wax laga barto, waxaana la furay sanadkii1965tii, waxaana magac loo yeelay 1973dii iyada oo markii hore ahayd xarun 2 sano lagu tababaro shaqaalaha Dawladda siisa, gaar ahaan maamulka iyo maaraynta iyo XTFW ee uu ka ahaa tababare Ibraahim Maxamed Sabriye
.Jaamacada Lafoole waxay ahayd tan keliya ee lagu barto luqadda afka Ingiriisiga iyadoo jaamacadaha kale ee dalka lagu baran jirey luqadda Talyaaniga. Macalimiinta caanka ka ahaa Jaamacadda Lafoole waxaa ka mid ahaa Prof. Axmed Maxamed Qaadi oo madax ka ahaa kulliyadda Taariikhda, Prof. Ducaale oo bare sare ka ahaa qaybta Juqraafiga, Prof. Neena Grish oo u dhalatay waddanka Hindiya oo bare ka ahayd qaybta taariikhda iyo Sheekh Sharif Abdinur Alle ha u naxariistee oo dhinaca shareecada iyo diinta bare ka ahaa iyo macalimiin kale oon halkan lagu soo koobi Karin.
Deegaanka lafoole waa deegaan soo jireen ah oo leh taariikh mugweyn oo aan la ilaawi karin taas ayaana keentay in laga dhigo jaamacada ama gole waxbarasho oo dadka si ay u ogaadaan taariikhdii ay kaga tageen qabiiladii deegaanka wacdaan iyo biyamaal oo ay kula diriray gumeystihii talyaaniga, magaca lafoole sida uu ku baxayna wuxu ahaa dagaal gacmaha la iskula tagay oo ay ku dhamaadeen gumeytihii talyaniga oo lafahoodii ay mesha yaaleen sanado badan aya uu ku baxay magaa meshii ay lafaha yaaleen sida ayana lagu dhahay lafoole. Jaamacada Lafoole markii hore waxaa dhigan jirtay Arday ay tababaraan hay'ado dowli ah sida US Peace Corps iyo Dawladda Jarmalka Galbeed. Markii Jaamacada Ummada la balaariyay ayaa dib u habayn iyo madaxbanaani la siiyay Lafoole iyada oo laga dhigay xarunta laylisa macalimiinta dugsiyada hoose/dhexe iyo sare ee wadanka.
Waxaa ay Jaamacada Lafoole soo saartay shaqaalihii ugu horeeyay oo dhamaan wasaaradaha iyo xarumaha Dawladda oo dhan ka howlgalay iyada oo manhaj Soomaaliya quseeya la baray halka markii hore tacliinta sare lagu soo qaadan jiray jaamacadaha inta badan Talyaaniga, Ruushka iyo Masar deeq waxbarasho noogu deeqi jireen isku dar ilaa 100 qof sanadkii.
Waaxyaha Jaamacada LafooleEdit
Arday aad u badan ayay Jaamacada Lafoole soo saari jirtay sanad walba. Waaxyaha Jaamacada Lafoole waxaa ka mid ahaa:
Arday gaareeyso in ka badan 1300 arday ayaa sanad walba ka qalin jabin jirtay Jaamacada Lafoole oo dhacda 22KM galbeed wadada Xamar iyo Afgooye u dhexaysa. Deegaanka Lafoole wuxuu ka tirsanyahay Degmada Shabeellaha Hoose.
Barayaasha iyo Dadka Caanka ahEdit
Dad badan oo dib loogu soo kordhicin doono bogaan ayaa jira waxaa jirta in Sheekh Shariif Cabdinuur Allaha xafidee uu dhalinyarada iyo bulshada Jaamacada Lafoole iyo waliba kuleejada Wiilasha ee Lafoole cilmiga diinta uga faa'iidayn jiray.
Hormuudyo wanaag badan ayaa soo maray waxaana xiligii qabta iyo kala haadka hormuud ka ahaa Jaamacada Lafoole Professor Nuux.
Jaamacada Lafoole waxaa bareyaal ka ahaa qurubo wadamo dhowr ah ka kala timid waxaase ugu badnaa bareyaal sarsare oo Soomaaliyeed iyada oo ay wehliyeen kuwo ka kala yimid, Bangaaladheesh, Hindiya, Masar, Ingiirska, Jarmalka Galbeeed iyo Maraykanka.
Jaamacada Lafoole waxay lahayd sida qaybta Kulliyada Gaheyr ee Jaamacada Ummada qayb hoy ah oo ay ardayda degaan. Gabdho iyo wiilal labadaba way degenaayeen.
Ardayda Jaamacada Lafoole dalxiis iyo shaqo barasho ayay gobollada u aadi jireen, gaar ahaan kuwa culuunta bulshada iyaga oo safaro la geli jiray qaybta xanaanada xoolaha, beeraha iyo dhaqaalaha iyagoo beeraha Janaale, Bardhere, Jaamaame iyo meelo kale booqan jiray.
Burburkii ka dibEdit
Wixii ka danbeeyay burburkii kacaanka jaamacada lafoole wee ka wada qaxeen profasoradii wax ka dhigi jirtay, inta aan ka eheen prof axmed jimcaale kaastaro allaha u naxariisto, prof cali gacal oo ilaa iyo hada uu dagan yahay deegaanka Lafoole. Deeganka Lafoole wuxu noqday deegaan ay ku nastaan dadyowga kaso qaxay magaalo madaxda Muqdisho.
Lafoole hada waxey noqotay meel ay usoo cararaan dadka dhibaatada Muqdisho kasoo gaartey, laga soo bilaabo dagaaladii dhexmaray dowladdii Maxamed Siyaad Barre Jan 1991 iyo ururkii USC. Sidoo kale waxaa kusoo qaxay dadki kasoo cararay dagaladii u dhexeeyay Cali Mahdi Maxamed Iyo Maxamed Farax Caydid. Sidoo kale qaxii dagaaladiidhex maray Maxaakiimta Islaamka kuwii Itoobiyaanka iyo Amisom.
Lafoole hada waxaa ku nool dadka Muqdisho ka soo barakacay iyo in ka hartay shaqaalihii hore ee dowladii Kacaanka sida Xeyle C/lle Maxamed, Maxamuud Ibraahim Yarrow(cagalaash), Cabdi Cali Xassan, maxamuud shine, Xaaji Cali Nuur, iyo sidookale Xasan Nuur Muudey Kuna magac dheeh (Xasan Burre).
Hada deegaanka waxa aad u dhistay barakacayaashii kaso bara kacay Muqdisho deegaanka waxay ka sameeyeen hurumar badan iyo xayndaabyo badan in kastoo hada ay tahay Lafoole meel markii ugu horeysay laga barakay markii ay qabsatay Dawladda FKG.
Liiska Jaamacaddaha Soomaaliya
↑ Xarunta Tababarka Farsamada Warshadaha
↑ Ibrahim Maxamed wuxuu ruqso ka qaatay 1977
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaamacadda_Lafoole&oldid=198263"
Last edited on 7 Jannaayo 2020, at 21:51
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 Jannaayo 2020, marka ee eheed 21:51.